विप्लवमाथि सरकारको एक्सन, तीन सातामा १८५ नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
१४ चैत्र २०७५, बिहीबार १५:३५
गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौ । विहीबार, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नवलपुर जनपरिषद् उपप्रमुख दीपकुमार घर्ती सोमै (सम्राट) प्रहरी फन्दामा परे । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रजहरको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
मंगलबार मात्र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष रामजी आचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रुपन्देहीको सुर्यपुरा माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक आचार्यलाई कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुर स्थित घरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यी घटना त केही प्रतिनिधिमुलक उदाहारण मात्र हुन् । सरकारले गत फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएपछि विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
कुन जिल्ला बाट कति पक्राउ ?
 महानगरीय प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँ – २२ जना
 सिन्धुपाल्चोक – १७ जना
 तनहुँ – १२ जना
 ललितपुर – १० जना
 कास्की – ९ जना
 इलाम – ८ जना
 चितवन – ७ जना
 म्याग्दी र बाँके – ६÷६ जना
 अछाम – ५ जना
 सप्तरी, सल्यान, सुनसरी, सोलुखुम्बु, बारा, रुपन्देही र पर्सा – ४÷४ जना
 सर्लाही, कपिलवस्तु, कालिकोट, दाङ, नवलपरासी पूर्व, धनकुटा, प्यूठान, संखुवासभा र रोल्पा – ३÷३ जना
 उदयपुर, डोल्पा, भोजपुर, रामेछाप, रुकुम पश्चिम, नवलपरासी पश्चिम, रौतहट, लमजुङ, पाँचथर, मकवानपुर, गोरखा, झापा, गुल्मी, कैलाली, धादिङ, तेह्रथुम, मोरङ र नुवाकोट – १÷१ जना
जम्मा – १८५ जना
स्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालय
प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार, पक्राउ परेकामध्ये अहिले सम्म कै सबैभन्दा उच्च तहको नेता भने मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्त प्रकाश ओली (सुदर्शन) नै हुन् । ओली विप्लवको पार्टीका तेस्रो नम्बरका नेता हुन् । दोस्रो नम्बरका मानिएका प्रकाण्डलाई भन्दा विप्लवले स्थायी समिति सदस्य ओलीलाई विश्वास गर्छन् । ओलीले नख्खु बम विस्फोटको जिम्मेवारी लिएका थिए ।
ओली मात्र होइन, विप्लव समूहका मोरङ जिल्ला इञ्चार्ज कृष्णकुमार श्रेष्ठ (प्रज्वल) पक्राउ परेका छन् । यता शंकर अधिकारी, धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, विजय श्रेष्ठ, ललित लामा, सन्जीव कार्की, वेद घिमिरे र लोकेन्द्र खड्का लगाएतका नेता समेत पक्राउ परिसकेका छन् ।
यसबाहेक अखिल क्रान्तिकारीका अछाम जिल्ला कोषाध्यक्ष सुरेश रावत, युवा सङ्गठनका जिल्ला सदस्य सुरेश साउद, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी भुमिसरा धामी र युवा सङ्गठनका राजेन्द्र धामी पनि पक्राउ परेका छन् । कोशी ब्युरो इञ्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठ (पुष्कर), नेताहरु टीकाराम नेपाली र लालबहादुर सुनार पनि पक्राउ परेका छन् । सप्तरी जिल्ला ईन्चार्ज सहित तीनजना तेजनारायण यादव, नुन्नु राम र गणपति साह पनि पक्राउ परेका छन् । यता म्याग्दीबाट जिल्ला जनसरकार प्रमुख जगेन्द्रबहादुर पुन पक्राउ परेका छन् । नवलपरासीका जिल्ला इन्चार्ज सुमन ज्ञवाली र नवलपुरका जिल्ला सदस्य धनबहादुर मर्दनिया पनि पक्राउ परेका छन् । कास्कीबाट प्रदेशस्तरीय नेता किसानसिंह गुरुङ पक्राउ परेका छन् । त्यसैगरी तनहुँबाट प्रहरीले भेषबहादुर सुनार, सुनील कुमाल र अमर बुढालाई पक्रिएको छ ।
हुन त नख्खुमा बम विष्फोट हुन अघि पनि विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता हरु पक्राउ परिहेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, गत बैशाख देखि माघ सम्ममा मात्र ३ सय ३८ जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका थिए ?
कुन महिना कति पक्राउ ?
 बैशाख – ६१ जना
 जेठ – ६१ जना
 असार – ५२ जना
 साउन – ४८ जना
 भदौ – ४२ जना
 असोज – ३३ जना
 कार्तिक – २ जना
 मंसिर – ४ जना
 पुस – १२ जना
 माघ – २३ जना
१ जनाको ज्यान जाने गरि नख्खुमा भएको वम विष्फोटको घटनापछि शृङ्लावद्धरुपमा आपराधिक घटना दोहोरिएपछि सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । त्यस यता प्रहरी, गाउँ–गाउँ पसेर विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिंदै आएको छ ।